गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने देउवाकाे तयारी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने देउवाकाे तयारी
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने तयारी गरेका छन्। सभापति देउवाले मंगलबार (आज) बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट नै गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनीत गर्ने तयारी गरेका हुन् । बैठकले ५ देखि ९ मंसिरसम्म तोकिएको महासमिति समयभित्र गर्न नसकिने भएपछि नयाँ मितिसमेत तय गर्ने भएको छ ।
स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले आइतबार साँझ नै पार्टीका शीर्ष नेतालाई फोन गरेर गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनीत गर्ने तयारीमा आफू रहेको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
देउवालाई सबैजसो शीर्ष नेताले सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् । तर, विधानमा हाल कायम रहेको व्यवस्थाअनुसार भने गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन मिल्दैन । कांग्रेसको हालको विधानमा पार्टीको पदाधिकारी हुनका लागि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, गच्छदार विशेष आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनलाई उपसभापति बनाउँदा सभापति देउवाले शीर्ष नेतालाई बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर मात्र बनाइने बताएका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पूर्वसहमतिअनुसार पनि नेता गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा आफ्नो असहमति नरहने प्रस्ट पारे ।
‘गच्छदारजीलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छौं, एउटा समिति बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने हो, हेरौं बैठकमा कस्तो प्रस्ताव आउँछ,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भने । गच्छदारनिकट नेता रामजनम चौधरीले मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकबाट नेता गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने सभापतिको तयारी रहेको बताए । ‘गच्छदारजीलाई उपसभापतिमा मनोनीत गर्ने तयारीमा पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, मंगलबारको बैठकमै उपसभापति बनाउने आश्वासन आएको छ,’ नेता चौधरीले भने ।
पार्टी एकताका समयमा भएको सहमतिअनुसार सभापति देउवाले नेता गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने आश्वासन दिएको उनले बताए । नेता गच्छदार पनि उपसभापतिको आकांक्षी रहँदै आएका छन् । उनी केही दिनयता सभापति, वरिष्ठ नेता तथा शीर्ष नेतासँग लबिइङमा छन् । नेता अर्जुननरसिंह केसीले हालकै विधानअनुसार नेता गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन नमिल्ने तर बाधा अड्काउ फुकाएर भने बनाउन सकिने जनाए ।
‘हालकै विधानले त गच्छदारजीलाई उपसभापति बन्न समस्या छ तर विशेष परिस्थितिमा बाधा अड्काउबाट गाँठो फुकाएर बनाउन सकिन्छ, उहाँका विषयमा हामी सकारात्मक छौं,’ नेता केसीले भने । उनले मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकका विषयमा भने कुनै एजेन्डा आफूलाई प्राप्त नभएको जनाए । तर, समसामयिक विषयमाथि छलफल भनी डाकिएको उनले बताए ।
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने बैठकमा नेता गच्छदारसँगको पार्टी एकता प्रक्रियामा भएको पूर्वसहमतिअनुसार के कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारे बैठकमा छलफल हुने जनाए ।
उनका अनुसार सहमति कार्यान्वयनका लागि बैठकबाट समिति बनाएर अघि बढ्ने संस्थापन पक्षको तयारी छ । पूर्वसहमतिअनुसार गच्छदारको पार्टीबाट आएका १५ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्छ । तर, सो विषयमा भने समितिमार्फत कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने देउवाको तयारी छ ।
सो समितिले गच्छदारसँगको सहमतिअनुसार अरू केन्द्रीय सदस्य, महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिबारे के कसरी टुंगो लगाउने भन्ने राय दिनेछ । कांग्रेसले तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकता गर्दा २० हजार क्रियाशील सदस्यता दिने सहमति गरेको थियो । गच्छदारले ६३ जिल्लामा रहेको आफ्नो संगठनका लागि ५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत पाउनुपर्ने बताएका थिए । यस्तै, महासमितिमा पनि ३ सयलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उनको माग थियो ।
विधान ताक्दै पौडेल–सिटौला समूह
कांग्रेसभित्रको संस्थापनइतर समूह मानिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह भने पार्टीको विधानमाथिको बहसमा केन्द्रित भएको छ ।सोमबार नेता पौडेलको निवास बोहोराटारमा भएको सो समूहको बैठकमा महासमितिको बैठक सर्ने भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा विधानमाथि के कसरी छलफल गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको थियो ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो निवासमा भएको सोमबारको छलफलमा विधानको कामबारे नेताहरूसँग जानकारी लिएको जनाए ।
‘बैठकमा त्यस्तो अरू त केही भएन, विधानको काम के कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे जानकारी मागेको हुँ,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भने ।
हाल कांग्रेसभित्र नेताहरूबीच विधानका मूलभूत विषयमा असमझदारी रहँदै आएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू नयाँ विधानबाट सभापतिलाई बलियो बनाउनेगरी हालको विधानमा भएको भन्दा थप अधिकार राख्ने पक्षमा छन् । संस्थापनइतर पक्ष हालको अधिकारसमेत कटाएर पार्टीका सबै पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रियामार्फत परिपूर्ति गर्नेगरी विधान बनाइनुपर्ने पक्षमा छ ।
यस्तै, निर्वाचन प्रणाली, केन्द्रीय समितिको आकार, पार्टी सदस्यता तथा पदाधिकारी संख्यालगायतका विषयमा समेत विधानमाथि नेताहरूबीच सहमति जुटेको छैन ।
गत २५ असोजका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक नेपाल विद्यार्थी संघको विधानमाथिको विवाद भएपछि यो समूह बैठक नै बहिष्कारको निर्णयमा पुगेको थियो भने सभापति देउवाले अन्तिम समयमा बैठक स्थगितसमेत गरेका थिए ।
छलफलमा केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो समूहको समान धारणा बनाउनका लागि नेताहरू सहमत भएका छन् । बैठकमा पौडेलसहित नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, नवीन्द्रराज जोशी, सीतादेवी यादव सहभागी थिए । राजधानी दैनिक